पोखरामा 'सेतो पुतली' आतंक, आँखामा पर्ला है ! बालबच्चा टाढा राख्नुहोस् - MazzakoNews
Home / भिडियो / पोखरामा ‘सेतो पुतली’ आतंक, आँखामा पर्ला है ! बालबच्चा टाढा राख्नुहोस्
Mazzako News 19th September 2017	भिडियो Leaveacomment
पोखरा भलामकी २ वर्षीया विपना थापा दौडिँदै थिइन्, पुतली आएर आँखामा ठोक्कियो । एकैछिनमा उनको आँखा चिलायो र दुख्न थाल्यो । उनका परेला सुन्निन थाले भने आँखा रातो हुँदै गयो ।
पोखरामा सेतो पुतलीबाट आँखामा यस्तो समस्या देखिएको ५ वर्षपछि हो । ‘हामीले यो रोगका विषयमा ख्यालै गरेनौं । यस्तो समस्या आउन छाडेको लामो समय भइसकेको थियो,’ हिमालयन आँखा अस्पताल पोखराका प्रमुख डा. इन्द्रमान महर्जनले भने, ‘अन्य समस्याजस्तै हामीले सामान्य रुपमा लिएर उपचार गर्‍यौं ।’
पोखरामा ५ वर्षयता सेतो पुतलीको झुसले हुने संक्रमणबाट आँखामा लाग्ने सापु रोग देखिएको थिएन । डा. महर्जनका अनुसार ५ वर्ष पहिले प्रत्येक २-२ वर्षमा यो समस्या देखिँदै आएको थियो । ‘आँखाको यस्तो समस्या लिएर आएपछि हामीले सुरुमा सामान्य उपचार गर्‍यौं ।
(समाधान दैनिकका लागि अमृत सुवेदीले लेखेका हुन् ।)
Previous माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य काउछा सहितका दर्जन नेता रातारात एमालेमा
Next पोखरा–काठमाडौं रुटमा ‘विश्वकै उत्कृष्ट बस’ ! प्रत्येक सिटमा टिभी, खाना टेबल